Seranam-piaramanidina Sheremetyevo any Moskoa: mpandeha 4.3 tapitrisa mahery no nanompo tamin'ny Q1 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Seranam-piaramanidina Sheremetyevo any Moskoa: mpandeha 4.3 tapitrisa mahery no nanompo tamin'ny Q1 2021
Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nahatratra 1.674 tapitrisa ny totalin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo tamin'ny volana martsa
Moskoa Sheremetyevo no foibe be mpandeha indrindra any Eropa amin'ny Q1 2021
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa dia mpandeha Sheremetyevo 911,000 no nandeha tamin'ny zotram-piaramanidina iraisam-pirenena
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa dia mpandeha Sheremetyevo 3.391 tapitrisa no nandeha tamin'ny fitaterana an-toerana
Mpandeha maherin'ny 4.3 tapitrisa no nandalo Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, miaraka amin'ny totalin'ny volana martsa nahatratra 1.674 tapitrisa.
Izany no nahatonga an'i Sheremetyevo ho ivon-toerana be olona indrindra any Eropa mandritra ny telovolana.
Fihetsiketsehana 39,746 no niainga sy niainga tamin'ny fitrandrahana no natao tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, ary 14,676 no niainga ary niainga ny asa tamin'ny volana martsa.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa, mpandeha 911,000 mampiasa Sheremetyevo no nandeha tamin'ny zotram-piaramanidina iraisam-pirenena, ary 3.391 tapitrisa tamin'ny mpitatitra an-trano, nahitana mpandeha iraisampirenena 378,000 sy mpandeha an-trano 1.296 tapitrisa tamin'ny volana martsa fotsiny.
Ny tanjona iraisampirenena malaza indrindra amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity dia: Istanbul, Dubai, Male, Antalya ary Bishkek. Ny toerana itodiana malaza indrindra dia ny Sochi, St. Petersburg, Simferopol, Yekaterinburg ary Krasnodar.
* Ny angon-drakitra fifamoivoizana ataon'ny mpandeha dia misy ny zaza hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 2 taona.